ကျွန်တော် အလုပ်မနားရဲဘူး ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့မှာစုထားတဲ့ငွေမရှိလို့ပဲ ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် လုပ်လက်စ အလုပ်တွေမပြီးသေးလို့ပဲ ။
ကျွန်တော် အပျင်းမကြီးရဲဘူး ။
ဘကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် ထက်သာတဲ့သူတွေတောင် ကြိုးစားနေကြဆဲမို့ပါ ။
ကျွန်တော်မှာ ရွေးစရာလမ်းတွေ အများကြီး
ဒါပေမဲ့ ရွေးပြီးသားလမ်းကိုတော့ ဘယ်တော့မှ မပစ်ဘူး ။
ဘယ်သူဘယ်လောက်ပဲ ကိုယ့်ကိုမကောင်းဘူးပြောပြော အချိန်တန်တော့ သူ့ဖာသာသူ နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ထဲမှာ လာထည့်ထားနေစရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ်ဘယ်သူ့အပေါ်မှာမှ အကြွေးမတင်ရင်တော်ပါပြီ ။
စိတ်အေးအေး ထားတက်အောင်ကြိုးစားပါ ။
လူ့ဘဝဆိုတာ အတက်ရှိသလို အဆင်းလဲရှိ တတ်ပါတယ် ။
သူများတွေကို လိုက်ပြီး ကဲ့ရဲ့နေစရာလဲ မလိုပါဘူး ။
ဘဝကပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကို ကြေညက်လေလေ ကိုယ်က ကံကောင်းလေလေပါပဲ။
လူ့လောကကြီးမှာ ဘယ်အလုပ်မှ မပင်ပန်းဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ မရှုပ်ထွေးတဲ့ မိသားစု အသိုင်းဝိုင်း ဆိုတာလဲ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကတော့ လုံးလ ဝိရိယ ဇွဲ ဆိုတဲ့ လမ်းကိုပါပဲ။ ဘယ်သူကိုမှ မနာလို မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီအခြေအနေထိရောက်ဖို့ ဘယ်လောက်ထိ နေ့မနားညမနားလုပ်ခဲ့လဲ ဆိုတာပဲ မေးကြည့် လိုက်ပါ ။
လူတိုင်း လူတိုင်းလည်း လွတ်လပ်မှု့ကို လိုချင်ကြမှာပါပဲ။ အလုပ်မလုပ်ပဲ အိမ်မှာထိုင်စားနေတဲ့သူကို တောင်မေးကြည့် လိုက်ပါ ။သူတို့လည်း သူတို့အပူနဲသူတို့ပါ ။
ပစ္စည်းဥစ္စာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ ကိုယ်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ဘယ်အရာမဆို တန်ဖိုးရှိအောင်သုံးပါ။
ဒါကြောင့်ဘယ်သူ့ကိုမှ မနာလိုစရာအကြောင်းမရှိဘူး ။
လူဘဝက တိုတိုလေးပါ ဘာမှပြိုင်စရာမရှိပါဘူး ။ ကိုယ်ဘယ်လောက် ကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးပြီလဲ ?
လူတိုင်းဟာ သူလိုကိုယ်လိုပဲ… ။ ဒါကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သဘောထား ကြီးကြီးထားပါ။ မောင်နှမလို ဆက်ဆံပါ။ အားပေးအပြုံးလေးတွေ ပေးပါ။
ဒီလို ဆိုရင်တော့ လောကကြီးက ပျော်စရာကြီးပါ။
Change your brain ,Change your life.
Credit: မင်္ဂလာပါ သူဌေးမင်းကြီး
Read 12630 times Last modified on Wednesday, 14 March 2018 12:04